Sebenzisa uLawulo lwebhokisi yeCombo kwiDeshibhodi yakho ye-Excel
Ulawulo lweCombo Box luvumela abasebenzisi ukuba bakhethe kuluhlu olwehlayo lwezikhetho ezichazwe kwangaphambili kwideshibhodi ye-Excel okanye ingxelo. Xa into evela kulawulo lweCombo Ibhokisi ikhethiwe, isenzo esithile sithathwa kunye nokhetho. Ukongeza ibhokisi ye-combo kwiphepha lakho lokusebenzela, landela la manyathelo:
Cofa u Faka uluhlu olwehlayo phantsi kwethebhu yonjiniyela.
ukuxuba usukuquil kunye ne-nyquil
Khetha ulawulo lweFom yeBhokisi yeCombo.
Cofa indawo kwindawo yespredishithi apho ufuna ukubeka khona ibhokisi yebhokisi.
Emva kokuba ulahle ulawulo kwispredishithi sakho, cofa ekunene kulawulo kwaye ukhethe uLawulo lweFomathi.
Cofa indawo yoLawulo ukubona iinketho zoqwalaselo eziboniswe kulo mzobo.
Ithetha ntoni i-d5w
Kwiseti yokufaka, chonga uluhlu olugcina izinto ezichazwe kwangaphambili ofuna ukuzenza njengokhetho kwibhokisi yokudibanisa.
Kwibhokisi yeKhonkco leSeli, ngenisa iseli apho ufuna ibhokisi yokudibanisa ukuze ikhuphe ixabiso layo.
Ulawulo lwebhokisi ye combo ikhupha isalathiso senani lezinto ezikhethiweyo. Oku kuthetha ukuba ukuba into yesibini kuluhlu lukhethiwe, inombolo yesi-2 iya kukhutshwa. Ukuba into yesihlanu kuluhlu ikhethiwe, inombolo yesi-5 iya kukhutshwa. Qaphela kumzobo ongaphambili ukuba olu lawulo luphumela kwiseli E15.
Uqeqesho lokunganyangeki luyithintela njani i-osteoporosis
Kwibhokisi yeMigca yokuLahla, faka inani lezinto ozifunayo eziboniswe ngexesha elinye.
Uyabona kumfanekiso odlulileyo ukuba olu lawulo lufomathiwe ukubonisa izinto ezili-12 ngexesha elinye. Oku kuthetha ukuba xa abasebenzisi bandisa ibhokisi yebhokisi, babona izinto ezili-12.
(Ngokuzithandela) Unokukhetha i-3-D Shading ibhokisi yokujonga ukuba ufuna ulawulo lube nembonakalo-ntathu.
Cofa ku-Kulungile ukuze usebenzise utshintsho lwakho.
indlela yokunyusa amanqanaba e-vitamin d ngokukhawuleza
indlela yokuhambisa mp3 kwi-android
sys yeewindows 7
Umthamo we-lasix wezinja
inqanaba le-purine kukutya